Fidinana ifotony : Faritra maro no nalehan’ny eo anivon’ny DGJ
Tsy mitandro hasasarana ny eo anivon’ny « Direction des Greffes Judiciaires » notarihan-dRamatoa Talen’ny Firaketan-draharahan’ny Fitsarana. Faritra maro no nanaovana fidinana ifotony.
Ny Alarobia 06 Oktobra 2021, andro fahatelo no nihaonana tamin’ireo lehiben’ny Fitsarana, ny lehiben’ny firaketan-draharaha ary ireo mpiraki-draharaha ao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Fenoarivo Atsinanana.
Ny Alakamisy 07 Oktobra 2021 kosa dia ny teo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany tao Vatomandry no nanohizana ny fitsidihana, ary namaranana izany ny tao amin’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany ao Moramanga ny Zoma 08 Oktobra 2021.
Izany no natao moa dia ho fanatsarana hatrany ny kalitaon’ny asa firaketan-draharaham-pitsarana, ho fanomezana fahafaham-po ireo manan-draharaha eo anivon’ny fitsarana, ary indrindra ho fanamorana ny fanatonan’ny vahoaka ny Fitsarana.
← Pejy an-tsary : Fidinana ifotony eto Fianarantsoa
Fanajana ny zon’olombelona : Natolotra androany ny Fonjaben’i Fianarantsoa →